धर्ति माता पोखरामा आउदा यस्तो भयो ! देउता बोल्न थाले ,मातालाई भेट्दा रुवाबासी(भिडियो) – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/धर्ति माता पोखरामा आउदा यस्तो भयो ! देउता बोल्न थाले ,मातालाई भेट्दा रुवाबासी(भिडियो)
मान्छेहरु ठगी खाने माता भन्छन् । मैले धेरै पैसा बैंकमा राखेको रेकर्ड छैन । दाजु भाईले दिएको चारपाँच तोला सुन छ । भिडियो हेर्नुस्